Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖိုထုတ်လုပ်သူ,အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမီးဖိုတွင်ဖုန်ကောက်ခံသူများ၏စျေးနှုန်း,အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖို Deduster
အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမီးဖိုအရည်ပျော်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းတွင်လေထုထဲသို့မီးခိုးများနှင့်ဖုန်များများထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းစေပြီးအလုပ်သမားများ၏ကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေသည်။ အလတ်စားကြိမ်နှုန်းမီးဖိုသန့်စင်စနစ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အလတ်စားကြိမ်နှုန်းမီးဖိုပစ္စည်းကိရိယာများ၏အရည်ပျော်အလုပ်လုပ်အခြေအနေကိုကြာပါသည်။ အဆင့်နိမ့်ထီးရွေ့လျားနေသောအဖုံးပုံစံကိုဓာတ်ငွေ့ဖမ်းယူခြင်းပုံစံတွင်အသုံးပြုသည်။ ဖုန်မှုန့်ဓါတ်ငွေ့များကို LQM pulse အိတ်စစ်စစ်မှတဆင့်အဓိက flue gas pipeline မှ ဖြတ်၍ သန့်စင်သည်။ သန့်စင်ပြီးသောအခါသန့်ရှင်းသောဓာတ်ငွေ့သည်လေမှုတ်စက်ထဲသို့ထွက်သောဆလင်ဒါသို့လွှတ်လိုက်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတိုးတက်စေပြီးပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုသေချာစေပြီးကောင်းမွန်သောရလဒ်များမရရှိစေရန်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၁။ လေထုညစ်ညမ်းမှုအရင်းအမြစ် - သံမီးဖိုနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာအလတ်စားကြိမ်နှုန်းမီးဖိုတစ်ခုသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်အပူဖြင့်အပူပေးသောအကြိမ်ရေမီးဖိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ် ဦး အတော်လေးသန့်ရှင်းတဲ့ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်၏ နောက်တစ်ခုမှာမြေကြီးမီးဖိုနှင့်လူသိများသည့်မီးခိုးငွေ့နှင့်လောင်စာ - ကိုကာကိုလာဖြစ်သည်။ မီးဖိုသည်များသောအားဖြင့်မီးခိုးများထွက်စေပြီးအသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ သံသတ္တုစပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သောထွက်ကုန်ဓာတ်ငွေ့များသည်အများအားဖြင့်ဖုန် (မီးခိုး) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် PbO, ZnO, Cu, Pb, Zn, Sn စသည်ဖြင့်ပါဝင်သည်။ အမှုန်အရွယ်အစားအများအားဖြင့် 0.5 မီတာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဌာနသည်သံမဏိများမဖွဲ့စည်းထားသောဖုန်မှုန့်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး၊ ဖုန်မှုန့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏ရလဒ်မှာ ၃၂.၁ g / m3 အထိရှိပြီးတိုင်းပြည်၏လက်ရှိထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်မှာ ၃၀ မီလီဂရမ် / m3 သာဖြစ်သည်။ အဆိုပါဥတုစံထက်ပိုသည်။
၂။ အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမီးဖိုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့်နိယာမနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအိတ်ထဲမှဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့၊ သေးငယ်သောဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများသည်အ ၀ တ်အထည်ကွာဟမှုမှဖုန်မှုန့်အလွှာများနှင့်ဖုန်မှုန့်အမြောက်အများကို ဖြတ်၍ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်မြေထုဆွဲငင်အားကြောင့်ပြာကျသွားသည်။ ပုံး။ filter ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်မှုန့်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထူလာသောအခါခုခံမှုတိုးပွားလာပြီးကွာဟမှုမှာလည်းအဆက်မပြတ်ကျဆင်းလာသည်။ လေထုစီးဆင်းမှုကိုဖြတ်သန်းရန်ခက်ခဲပြီးဖုန်မှုန့်အလွှာသည်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိစုဆောင်းနိုင်သည်။ အိတ် filter သည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည် - (၁) ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ထုတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် ၉၉.၉၉% အထိ၊ ဖုန်မှုန့် 10 mg / m3 သာလျှင်; 2. ခိုင်ခံ့သောအလိုက်အထိုက်နေတတ်မှု၊ ကွဲပြားသောအမှုန်အမျိုးမျိုးနှင့်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်၊ ကုသနိုင်စွမ်းသည်သေးငယ်သည်။ ၃။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု elasticity ကြီးသောအခါ Inlet gas ရှိဖုန်မှုန့်ပမာဏသည်ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖုန်မှုန့်ဖယ်ထုတ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသည်။ (၄) ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုတည်းသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးပြုခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများပြန်လည်လွယ်ကူစွာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၃။ အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမီးဖိုအတွက်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ယေဘူယျဖြစ်စဉ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
၁) သံမီးဖိုအမှုန့် (မီးခိုး) ဖုန်မှုန့်
အလတ်စားကြိမ်နှုန်းမီးဖိုဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက် 4. အချက်များ
(၁) filter အိတ်ရွေးချယ်ခြင်း - filter အိတ်သည် wear ခံနိုင်သည့်အပြင်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်း၊ ဖန်မျှင်အမျှင် / ၀ တ်စုံ၊ NOMEX, အပ်အမွှေး၊ P84 အပ်အစရှိသဖြင့်ရွေးချယ်သင့်သည်။ ရှည်လျားသောအပူချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များစသည်တို့ကိုစစ်ထုတ်သည့်အိတ်၏ wear ခံနိုင်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအားဖြင့်ကြေးနီစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် NOMEX needle needle ကိုရွေးချယ်သည်။ (၂) အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း - အထွေထွေ NOMEX filter အိတ်၏အပူချိန် 200 c ဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ကုသမှုဌာန၏ဝင်ပေါက်အပူချိန်ကို 200 c အောက်တွင်ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ ရှည်လျားသောမီးခိုးပိုက်ပြီးနောက်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့် box သို့ရောက်ရှိသောအခါ flue ဓာတ်ငွေ့ 200 ဒီဂရီအောက်သို့လျှော့ချနိုင်သည်။ အထူးကိစ္စများတွင်ရေကိုအအေးခံနိုင်ပြီးအအေး (၃) ကိုစုစုပေါင်းပိုက်တွင်တပ်ဆင်ပြီးပန်ကာကိုရွေးချယ်ရန်ပန်ကာကိုရွေးချယ်သည်။ ပန်ကာသည်ပန်ကာထက် ပို၍ ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ (4) စက်မှုဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးသည်လက်ဖြင့်ကောက်ယူခြင်းထက်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီးသန့်ရှင်းပါသည်။ သို့သော်စက်မှုဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမြင့်မားပါသည်။ (၅) လေယိုစိမ့်မှုနှင့်ခုခံမှု - အိတ်စစ်ထုတ်မှု၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ထုတ်မှု၏သီအိုရီကိုတွက်ချက်မှုသည် ၉၉.၉၉% ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်တိုင်းတာမှုသည်လေထုယိုစိမ့်မှုနှင့်ခုခံနိုင်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမရောက်ရှိနိုင်ပါ၊ လေထုယိုစိမ့်မှုနှုန်းနိမ့်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားရေး; ခုခံမှုသည်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အိတ်များကိုရှင်းလင်းခြင်း၊ ခုခံမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ (၆) ဖုန်မှုန့်အဖုံးများသည်ဖုန်မှုန့်အဖုံးများထဲသို့လွယ်ကူစေရန်၊ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုမရှိသောထုတ်လွှတ်မှုလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်နိုင်သမျှမီးဖိုခေါင်းနှင့်နီးကပ်စွာထားသင့်သည်။ အချိန်မီထုံးစံ။ (၈) လေစီးဆင်းမှုနှုန်း - ၁ ~ ၃ မီတာ / စလေထွက်နှုန်းမြန်နှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိပြီးအထွေထွေလေတိုက်နှုန်းကို ၂ ~ ၄ မီတာ / စနှုန်းဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ (၉) filter areaရိယာ - filter filter theရိယာပိုကြီးလေလေဖုန်မှုန့်ဖယ်ထုတ်မှု၏ထိရောက်မှုမြင့်မားသော်လည်း၊ ထို့ကြောင့်လေထုပမာဏကိုကြိုတင်တွက်ချက်ပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ (၁၀) ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း (၂) ဆင့် - ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးနှစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့်သေတ္တာရှေ့တွင်နေရာထိုင်ခင်းအခန်းတစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ နေရာချထားပေးသောအခန်းသည်အမှုန်အကြီးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအပူချိန်ကိုလျှော့ချပေးပြီးဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများ၏ဖိအားကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖိုထုတ်လုပ်သူ , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမီးဖိုတွင်ဖုန်ကောက်ခံသူများ၏စျေးနှုန်း , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖို Deduster , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖိုချွတ်စက် , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖိုအိတ် , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းသော induction မီးဖိုထုတ်လုပ်သူ , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖိုကုန်ကြမ်းဖုန်ကောက်ခံသူ , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမီးဖိုကောက်ခံရေး